Kexi 3.1 imwe yemahara imwe yeMicrosoft Access | Linux Vakapindwa muropa
Kexi 3.1 imwe yemahara imwe yeMicrosoft Access
Kunyangwe paine chokwadi chekuti webhu kunyorera kuri kutonga munyika yekomputa, kuchine vazhinji vashandisi vanofanirwa kushandisa izvo zvechinyakare zvinoshandiswa. Zvishandiso senge izwi processor kana dhatabhesi. Zviri nyore kuwana yakawanda mienzaniso yerudzi rwekutanga rwezvishandiso, asi hazvina kujairika kuwana zvakanaka sarudzo senge dhatabhesi.
Dambudziko harisi rekuti hapana dhatabhesi asi mukutsvaga dhatabhesi inoenderana nezvirongwa zvakasiyana uye mafomati. Microsoft Kuwana idambudziko hombe mune iyi pfungwa sezvo mazana edatabhesi akagadzirwa neichi chishandiso haapindirane kwazvo nemamwe marudzi edhatabhesi.
Imwe nzira yakanaka kuMicrosoft Access ndeyeKexi. Kexi maneja wedhatabhesi weiyo Calligra hofisi suite. Ichi chishandiso chinoenderana chaizvo nedatabhesi dzakagadzirwa neMicrosoft Access asi kuchine zvakawanda zvisingawirirane nerudzi urwu rwe database, kunyanya kana vaine Microsoft inozivikanwa "macros".
Kune rimwe divi, kana isu tichida kushandisa yemahara imwe nzira, Kexi ndiyo imwe nzira yakanaka. Kexi 3.1 ndiyo yazvino vhezheni uye neshanduro yakavandudzwa ichienzaniswa neshanduro dzekare. Kexi 3.1 inodzokera kuWindows, saka iyo Calligra database maneja ndiyo imwe nzira yakanaka kune avo vari kutsvaga Mahara Software.
Kexi 3.1 inosvitsa zvivakwa zvitsva kuKProperty uye KReport, zvivakwa zvinovandudza kugadzirwa kwematafura uye dhatabhesi. Kexi 3.1 zvakare ine varoyi vanozotibatsira kupinza matafura, hukama uye dhatabhesi kubva kune vamwe mamaneja seAccess, FileMaker kana OracleForms.
Kexi 3.1 ndeye yemahara dhatabhesi maneja iyo padiki padiki ave kuzvimiririra kubva kuCalligra saKrita uye zvatingaite pamwe chete naCalligra kana Kexi chete. Ose maviri ekuisa mapakeji ari mu Webhusaiti yekurodha yaCalligra kana isu tinogona kuiisa pane yedu Gnu / Linux system nekuda kwemukuru wepakeji maneja wekugovera.
Parizvino sarudzo yakanakisa ndeye maneja wedhatabhesi anoshandiswa muwebhu application. Iyi mhinduro ine simba uye yakapenya kupfuura chishandiso chakajairwa asi zvinogona kunge isu tinoda kuchengetedza data redu kana kuva nechimwe chinhu chinoonekwa, yemamiriro ezvinhu aya, zvakanakisa kushandisa Kexi kana LibreOffice Base, kunyangwe Kexi iri imwe nzira yekuona yevashandisi veavice Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Kexi 3.1 imwe yemahara imwe yeMicrosoft Access
Mhoro. Kexi ndave nenguva ndichiiziva, uye chokwadi ndechekuti inoshanda zvishoma nezvishoma zvekuti handizivi kuti ndichaisiya here. Ndakafara nazvo, asi zvinogona kutora angangoita maminetsi maviri kana matatu kugadzira rondedzero. Uye kuenda kubva kuKugadzira kuenda kuReport kunotora imwe nguva yakawanda. Izvo zvakare hazvikubvumidze iwe kukopa minda kubva kune imwe mushumo kuenda kune imwe muDesign mode. Uye haibvumiri zvimwe zvinhu kuti zvikopwe zvakare. Ah, kana uchigadzira rondedzero zvichienderana nemubvunzo, minda inoita seinochinja. Zvinosiririsa kuti rutsigiro rwakawanda harupiwi kexi.
Atomu inogamuchira iyo inovandudza mashandiro
Chromium neFirefox ikozvino inogona kuiswa seinobaya paUbuntu